Indlu engasemva eKarlhem eÖrnsköldsvik - I-Airbnb
Indlu engasemva eKarlhem eÖrnsköldsvik
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguJörgen
I-100% yeendwendwe zakutshanje inike uJörgen iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Indlu yeendwendwe esandula ukwakhiwa kwi-45 sqm 2 km kumazantsi kwiziko le-Örnsköldsvik.
Igumbi elinye lokulala elineebhedi ezimbini ezingatshatanga, ikhitshi, indawo yokutyela, indawo yeTV enebhedi yesofa (120 cm) kunye negumbi lokuhlambela elineshawa. Ibhedi eyongezelelweyo kunye nebhedi ekhoyo.
Sazise xa ufuna izinto zokulala.
Ixhotyiswe ngefriji / isikhenkcisi, i-microwave, i-oven, i-coffee press, iTV, umatshini wokuhlamba njl.
I-WiFi kunye neendawo zokupaka ziyafumaneka. Isifudumezi se-injini ngentlawulo. Hayi izilwanyana okanye ukutshaya.
Sizama ukucoceka okuphezulu, ke shiya i-cottage ikwimeko efanayo naxa ufika. Intlawulo iya kubizwa ngenye indlela.
Ibala lokudlala likamasipala lisecaleni kwendawo yokuhlala. Ebusika, umasipala ugungxula irenki yomkhenkce kwibala lokudlala.
Enye yezona ndawo ziphezulu zegalufa eNorrland Ibala legalufa laseVeckefjärden kunye nendawo yokutyela imi kumgama oyi-1 km ukusuka kwindawo yokuhlala, kwindawo entle. Indawo yokutyela inikeza zombini isidlo sasemini kunye nesidlo sakusihlwa. http://veckefjarden.com
Umzila omthubi wonxweme oluphakamileyo kumakhulu ambalwa eemitha kude. Kukho nezinye iindlela kule ndawo. http://hogakustenleden.com
I-Slalombacke, i-Åsbacken, ikwi-1 km ukusuka kwindlwana. I-Åsbacken inamathambeka amathathu kunye neelifti ezimbini. Enye kukuphakamisa amaqhosha ukuya kwinduli yabantwana. Ngolwazi oluthe kratya ndwendwela iwebhusayithi http://www.friskaviljor.com
Indawo yokuhlambela yeparadesi kunye nokuba sempilweni yindlu yokuhlambela exatyiswa kakhulu ngabantwana kunye nathi sibadala. I-spa yabo enezihlalo ze-aufgus iyamangalisa. http://www.paradisetornskoldsvik.se
Iploti kunye nepropathi zikufuphi neetreyini zokuqeqesha. Ezi ziziporo zikaloliwe koololiwe bomthwalo abadla ngokungadluli kodwa banokudlula ukuya kutsho ku-zero ukuya kumaxesha asibhozo ngosuku (ngokuqhelekileyo emini). Iindwendwe ezinike ingxelo azikhange ziyifumane iphazamisa. Ngumsele onzulu owahlula icebo elisingise emzileni ngoko ke kungabikho mngcipheko wokuba abantwana abancinci bangene kwiireyile ukusuka kwisakhiwo.
iibhedi ezilala umntu omnye eziyi-2, isofa ekwayibhedi eyi-1, imatrasi ebekwa phantsi eyi-1, \_u00A0Ibhedi yosana eyi-1
Umbuki zindwendwe ngu- Jörgen
Siyavuya ukunika iindwendwe zethu indawo yokuba nobomi babucala kunye nathi, yiyo loo nto kungena kwaye uphume uzenzele ngokwakho.
Nangona kunjalo, sihlala sifumaneka ngefowuni, umyalezo obhaliweyo, imiyalezo okanye ukuba uyafuna, unokucofa ikhaya lethu kwaye ubuze imibuzo okanye uthethe.
Nangona kunjalo, sihlala sifumaneka ng…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Staden